Sheekh Bashiir Ahmed Salaad oo wareysi gaar ah siiyey Shabakadda Somalireal.com.[Dhagayso]
April 25, 2013 - Written by Editor
Nairobi:-Sheekh Bashiir Ahmed Salaad oo ah Madaxa hay’adda Culimada Soomaaliyeed ayaa wareysi gaar ah siiyey Shabakada wararka ee Somalireal waxaana uu Sheekhu ka warbixiyey xaaladiisa caafimaad ka dib markii uu alle ka badbaadiyey Shirqool lagu dili lahaa.
Sheekh Bashiir Ahmed Salaad ayaa ka warbixyey waxqabadkii hay’adda Culimada Soomaaliyeed isaga oo sheegay in hay’adda Culimada Soomaaliyeed ay waxbadan qabteen waxyaabo kalana ay u dhiman yihiin.
Sheekh Bashiir Ahmed Salaad ayaa waxaa kale oo ka waramay dilka iyo gumaadka lagu hayo haldoorka umada iyada oo haatan loo soo jeestay in la beegsado culumada waxaana uu Sheekhu sheegay in aysan arinkaas gaar u ahayn culumada balse ay la wadaagaan umada Soomaaliyeed.
Sheekh Bashiir ayaa sidoo kale waxaa uu ka waramay baaq ay culumada soo saareen ka dib markii la dilay allaha u naxariistee Sheekh C/qaadir Nuur Faarax wuxuuna rajo ka muujiyey in shirka uu qabsoomi doono . Shabakadda wararka ee Somalireal.com ayaa sidoo kale weydiisay Sheekh Bashiir Ahmed Salaad gaaleysiinta uu Sh Xasaan gaaleysiiyey Jamaacada Al- Ictizaam Bilkitaab Wasunnah wuxuuna sheegay in arinkaas uu khalad yahay Sh Xasaana uu wax ismoodsiiyey.
Hoos Ka Dhageyso Wareysiga Shabakada Wararka Somalireal ay la yeelatay Sheekh Bashiir Ahmed Salaad.
Isha Maqalka Somalireal